【 အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး 】 “ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နှင့် booster dose ” | Opinion Leaders
Booster Dose ဆိုတာဘာလဲ?
ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးသူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကရောဂါကို ခုခံနိုင်စွမ်းဟာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု အကြာမှာကာကွယ်ဆေး အာနိသင်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ တစ်ခါထိုးပြီး အမြဲကာကွယ်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားပြန်မြှင့်ဖို့ ထပ်မံထိုးရတဲ့ဆေးကို booster dose လို့ခေါ်ပါတယ်။ Booster dose ဆိုတာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တစ်မျိုးထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး ကဲ့သို့သော ကာ‌ကွယ်ဆေးမျိုးတွေမှာလဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ၅ နှစ်ကြာရင် ကိုယ်ခံအားပြန်မြှင့်ဖို့ဆေး ထပ်ထိုးရတာတွေရှိပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးပြီး ၃လ မှ ၆ လ အကြာ မှာနောက်တစ်လုံး ထပ်မံထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ Booster Dose ထိုးဖို့လိုတာလဲ?
အသက် ၁၆ နှစ်‌ နှင့်အထက် လူတိုင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး Booster Dose ထိုးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Booster Dose ကိုဆေးအမျိုးအစားတူပဲထိုးရမလား မတူတာထိုးရမလား?
ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပုံကွဲပြားတဲ့အတွက် အမျိုးအစားမတူတဲ့ကာကွယ်ဆေးက ပိုထိရောက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Pfizer နဲ့ Moderna ကာကွယ်ဆေးကို booster အနေနဲ့ထိုးတာကပိုထိရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီဆေးအမျိုးအစားကို လက်ရှိမှာမရနိုင်သေးပါဘူး။
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိုမီခရွန်ကို တွေ့ရှိရပြီဖြစ်တာကြောင့် ကာကွယ်ဆေး ၂ကြိမ် အပြည့်ထိုးပြီးသူများအနေနဲ့ ၃လ မှ ၆လ အကြာမှာ Booster Dose ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Booster Dose ထိုးပြီးသွားသူတွေအနေနဲ့လည်း ပေါ့ပေါ့ဆဆ Mask မတပ်ပဲသွားလာခြင်းမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဟာရောဂါကူးစက်နှုန်းကို လျော့ချခြင်းဖြစ်ပြီး‌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ရာနှုန်းပြည့်မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရတာတွေရှိပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးဟာ ရောဂါကူးစက်ခံရလျှင် ရောဂါပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်
တာကြောင့် ‌ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးလျှင်ထိုးပါ၊ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူများအနေနဲ့ ၃လ မှ ၆လ အကြာမှာ Booster Dose ထပ်မံ ထိုးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
လက်ဆေး ၊Mask တပ်၊ခပ်ခွာခွာနေဖို့ ကတော့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကာကွယ်မှုတွေဟာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲအခြားသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်တတ်သောရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ တုပ်ကွေး၊တီဘီ အစရှိသော ရောဂါတွေကိုပါကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် Maskတပ်တဲ့အကျင့်လေးကို မဖြစ်မနေလိုက်နာကြစေလိုပါတယ်။